Ukuqhelaniswa nabaThengi-Iindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Ixesha: 2021-04-22 I ngxelo: 45
Ukuziqhelanisa nabathengi ibe yingcinga yeshishini le-COFF, enceda i-COFF ukuba iphumelele abathengi abathembekileyo nangakumbi. Ekupheleni kuka-2020, omnye wabathengi base-COFF baseYurophu wacela iseti yeCanning & Filling Machine. Umthengi ufumene iikowuti ezininzi ezivela kubenzi base China.
Nangona kunjalo, ekugqibeleni umthengi uthathe isigqibo sokufaka i-odolo kwi-COFF nangona wayesazi ukuba i-COFF ayisiyiyo ngqo umenzi. Ngexesha lokuqhuba ikhontrakthi, i-COFF yahambisa injineli yabo izihlandlo ezininzi kumnxibelelanisi wokunxibelelana ngesithuthi nomthengisi ngeenkcukacha zorhwebo nezobuchwephesha, kubandakanya uphawu kunye neemfuno zazo zonke izinto eziphambili kunye nezinto zombane.
Ukongeza, kwingxaki ephambili yomxholo weoksijini ngexesha lokuzaliswa komthengi oxhalabisa kakhulu, i-COFF yongeza esinye isixhobo kwiindleko zazo ukwenza umthengi afumane imveliso engcono ngexabiso eliphantsi. Ngaphezu kokusebenza komyalelo, i-COFF iya kuthumela injineli ubuncinci kube kanye ngeveki ukuze ijongane kunye nokuhlolwa kweshedyuli yemveliso kunye nomgangatho.
Ukuthenjwa kwabathengi kuye kwaxatyiswa kakhulu ngabantu beCOFF!
Ngolwazi oluthe kratya, qhagamshelana ne-pls Jessie@nbcoff.com
Previous: Lixesha lokuThumela kwakhona
Okulandelayo: Uxanduva lubaluleke ngaphezu kweTai yeNtaba